အပူပေးစက် Controller အကြီးစား Duty Rosin စာနယ်ဇင်း Kit dual-controller ကိုကျည်တောင့်အပူပေးစက်နှင့်အတူ Set 6061 လူမီနီယမ် 3in x ကို 5in Rosin ဟင်းပွဲ - တရုတ် DongGuan မုန်ဟာ့ဒ်ဝဲ
6061 အပူပေးစက် Controller အကြီးစား Duty Rosin စာနယ်ဇင်း Kit dual-controller ကိုကျည်တောင့်အပူပေးစက်နှင့်အတူ Set လူမီနီယမ် 3in x ကို 5in Rosin ဟင်းပွဲများ
rosin နှိပ်နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြဿနာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်။ ဆံခြည်တပင်ဖြောင့်သုံးပြီးဗဓေလသစ်၏အလွန်သေးငယ်သောပမာဏအထဲကညှစ်ရန်သင့်ဆန္ဒရှိမဟုတ်လျှင်, သင့်အနည်းငယ်နှစ်ကောင်သုံးဖြုန်းဖို့ရှိသည်သွား။ ကျွန်မအကြီးအစက်တွေအများကြီးဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့အသွားမြင်ကြပေမယ့်အများကြီး wouldn`t သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေးမဟုတ်လျှင်အဓိပ္ပာယ်စေဖြုန်းပါပြီ။
သင့်ရဲ့သင့်ရဲ့အရာနှစ်ခုလိုအပ်မယ့်ကြီးမြတ်အထွက်နှုန်းမှာအချို့ကောင်းသော rosin ထုတ်လုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်:
rosin ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါသင်သည်လက်ျာပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါက, လျော့နည်းအပူ, သငျသညျနီးပါးအအေးစာနယ်ဇင်း rosin နိုင်ဆိုလိုတာကပိုမိုမြင့်မားဖိအားမှာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ script ကိုကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုပြသရန်နှင့် ပတ်သက်. I`m သငျသညျထက်နည်း $ 500 အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင် DIY Rosin စာနယ်ဇင်းစေနိုင်သည်ဘယ်လောက်.
ကြောင်းခွင့်အရှိဆုံးအထွက်နှုန်းအဘို့အအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဖိအား 12,000lb ထွက်သတ်တဲ့နိုငျသောစာနယ်ဇင်း! လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, ကသာကို set up နဲ့သုံးစွဲဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။
Let`s Rosin ဆေးခြောက်ကနေအပေါငျးတို့သဖျော်ရည်ထုတ်ညှစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှိပ်, ကရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ မြက်ပင် (စက်ရုံကိစ္စ) မှဗဓေလသစ် extract မှအပူနဲ့ဖိအားသုံးပြီးအသုံးပြုပုံမည်သူမဆိုအချို့အရည်အသွေးမြင့်ဗဓေလသစ်လိုက်လျောနိုင်ပါ။
rosin နှိပ်နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြဿနာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်။ ၏အလွန်သေးငယ်သောပမာဏအထဲကညှစ်ရန်သင့်ဆန္ဒရှိမဟုတ်လျှင် တစ်ဦးဆံပင်ဖြောင့်သုံးပြီးစေး , သင့်အနည်းငယ်နှစ်ကောင်သုံးဖြုန်းဖို့ရှိသည်သွား။ ကျွန်မအကြီးအစက်တွေအများကြီးဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့အသွားမြင်ကြပေမယ့်အများကြီး wouldn`t သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေးမဟုတ်လျှင်အဓိပ္ပာယ်စေဖြုန်းပါပြီ။
မြင့်မားသောဖိအား - ကအနည်းဆုံး 500lb (2+ ပိုမိုနှစ်သက်တန်ချိန်) 1,000lb မှ
အပူ - 150 ° F ကို 350 ° F ကိုမှ (လိုလားသော 200 ° F) တွင်
rosin ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါသင်သည်လက်ျာပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါက, လျော့နည်းအပူ, သငျသညျနီးပါးအအေးစာနယ်ဇင်း rosin နိုင်ဆိုလိုတာကပိုမိုမြင့်မားဖိအားမှာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ script ကိုကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုပြသရန်နှင့် ပတ်သက်. I`m how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
DIY Rosin တူးစင်
နှစ်ချက် Rosin စာနယ်ဇင်းဟင်းပွဲများ Kit က Wired အပူလှံတံနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာ Duty Dual-Controller Box ကို
စာနယ်ဇင်းဟင်းပွဲများနှင့် H Frame ကနှင့်အတူ 6-Ton Hydraulic ဆိုင်ကြမ်းပြင်စာနယ်ဇင်း
သင့်ရဲ့မဟုတ်ပြည့်စုံစျေးမှာအတွက်ဆိုပါကသေး, နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအသေးစိတျကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ကြိုတင် rosin cookies တွေကိုနှိပ် ပိုမိုမြင့်မားများအတွက် terpenoid အထွက်နှုန်း။
အဆိုပါ Hydraulic စာနယ်ဇင်း
အစိုင်အခဲကို H-frame ကို၌ကျိန်းဝပ်တစ်ဦးကအစွမ်းထက်ခြောက်လတစ်တန်နှိပ်ပါ။ စူပါခိုင်မာတဲ့နဲ့ရိုးရိုးဆောက်လုပ်ရေးတင်ထားရန်လွယ်ကူသော Hacking ကို။ အဆိုပါဘက်သံလမ်းကိုသင်ပြုပြင်အာကာသကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပေါက်တွေရှိသည်။ ဒါဟာအစ2စာနယ်ဇင်းပြားလည်းပါဝင်သည်, သူတို့ကိုအသုံးချ! သူတို့ကသင့်ရဲ့အပူပြားကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ 60lb စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူ, သငျသညျကိုလုံခြုံစွာထုတ် crank နိုင်ပါတယ် ဖိအား၏6တန်ချိန် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထက်လမ်းပို။
အဲဒီမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ပြားကိုပိုမိုကြောင်းလုံလောက်စွာအပူ generate နှင့် 8000psi အထိခံနိုင် !, မိနစ်0င် 415 ° F သို့° F ကို။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, အပြားတစ်ခုအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်အတူလက်ျာအပူချိန်အပူကြသည်! သငျသညျဆူပြားနှင့်အတူတစ်ဝှမ်းလူရှုပ်ဖို့ရှိသည် don`t, ဒါမှမဟုတ်တခြားပုံနှိပျကဲ့သို့သောထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲမတိုင်မီ rosin ဖိကြလျှင်, သင်ဘာလုပ်တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောစိတ်ကူးရှိသင့်နှင့်ဤသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းတည်ဆောက်ခြင်းသင်သည်ငွေသားတစ်တစ်တန်နဲ့ save နှစ်ဆစျေးနှုန်းများမှာအခြားပုံနှိပျထက် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်လျှင်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကို set up5"X3" platen 1.Plug နှင့်ကစား။ ကျနော်တို့ကအလင်းသောကွောငျ့ခိုငျမာ, 6061 လူမီနီယံကိုသုံးနှင့်မျှမပူအစက်အပြောက်စေအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူလွှဲပြောင်းရှိပါတယ်!
2.Dual အပူပြား, တစ်ခုတည်းအပူ zone.This မျှဝေတစ်ဦး, ကြိုးစားခဲ့စမ်းသပ်ပြီးနှင့်သာဓကရာပေါင်းများစွာအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုသက်သေပြနေသည်နှစ်ဦးစလုံး။ ကျနော်တို့ကို dual controller ကိုမပိုကောင်းအထွက်နှုန်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအတူကျယ်ပြန့်နှစ်ဦးစလုံးကိုစမ်းသပ်ပါတယ်။
အငြိမ့် 0-300F ထံမှ 3.Fully တိကျမှန်ကန်အပူချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ တိုက်ရိုက်ပြားသို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပူအာရုံခံစစ်ရေးလေ့ကျင့်, သငျသညျအတိအကျစစ်မှန်တဲ့ platen အပူချိန်ပေးခြင်း။
5.Made တစ်ဦး2"အချင်းသိုးထီးတကောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းနှင့်အတူ 20 တန်ချိန်ဆိုဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းတက် fit ရန်။
ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ, ငါတို့၏ပြား mounting ထိုသိုးပေါ်သို့နှစ်ခုအစုံ screw နှစ်ခု (ပါဝင်သည် hex သော့) တင်းကျပ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ Setup ကို5မိနစ်ထက်လျော့နည်းကြာ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက် 500w သည့်အရာတစ်ခုအပူဒြပ်စင်နှင့်အတူထက်နည်း 10 မိနစ်၌သင်တို့၏တပ်မက်လိုချင်သောအအပူချိန် 6.Reach ။
2pcs 6061 လူမီနီယမ်လုပ်ကွက်
နှစ်ခု 500w သည့်အရာတစ်ခုအပူဒြပ်စင်မှကြိုးဒစ်ဂျစ်တယ် controller ကို
ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့စာနယ်ဇင်းရန်သင့်ပြား mount မှ hex သော့ချက်